Rui Chang, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Waaxaha Neuroscience iyo Cilmiga jirka iyo unugyada jirka, Yale University School of Medicine
Sreeganga Chandra, Ph.D. Associate Professor, Waaxyada Neurology iyo Neuroscience, Yale School School of Medicine
Laga soo bilaabo mindhicirka illaa maskaxda: Fahmitaanka faafinta cudurka Parkinson
Cudurka Parkinson waa cudur si ballaaran loo yaqaan laakiin weli qarsoodi ah neerfaha neerfaha oo si ba'an u saameeya tayada nolosha. Sida saxda ah ee cudurku kubilaabmo lama oga, laakiin cilmi baaris dhowaan la sameeyay ayaa muujineysa in ugu yaraan kiisaska qaar ee cudurka Parkinson ay ka soo baxaan mindhicirka oo ay ku faafaan maskaxda iyadoo loo marayo dareemaha xubinta taranka, dareen dheer oo isku dhafan oo dhinacyo badan leh kuna xiraya xubno badan maskaxda.
Dr. Chang iyo Dr. Chandra waxay u qaadanayaan aragtidan faafinta mindhicirka illaa maskaxda heerka ku xiga cilmi baaristooda. Labadooda ujeedadood ee ugu horeysa waxay raadinayaan inay si sax ah u aqoonsadaan tirada dadka vagal neuron ee gudbiya cudurka Parkinson iyo habka ay u shaqeeyaan xiidmaha iyo neerfayaashaan. Tijaabadu waxay isticmaashaa qaab jiir, irbado borotiino ah oo soo jiidan kara cudurka Parkinson, iyo hanaan sheeko cusub oo lagu calaamadiyo laguna xulo noocyada gaarka ah ee neerfaha. Iyadoo loo marayo tijaabooyin ay kujiraan neerfayaasha qaarkood, borotiinka la soo saaray, iyo jiirka loo baaray cudurka Parkinson, ayaa kooxda ku soo koobaysa musharixiinta gaarka ah. Ujeeddada saddexaad, kooxdu waxay rajeyneysaa in ay soo bandhigaan habka cudurka loogu qaado heerka meerkulka ee dareemayaasha.
Cilmi-baaristu waa wada shaqeyn, dadaal isku-dhafan oo lagu muujinayo khibradda Dr. Chang ee baaritaanka dareemaha vagal iyo nidaamka soo-galista iyo khibradda Dr. Chandra ee cudurka Parkinson iyo cuduradiisa. Waxaa la rajeynayaa in faham wanaagsan oo sax ah oo ku saabsan sida cudurku u gaaro maskaxda, bartilmaameedyada cusub ee ka fog maskaxda loo aqoonsan karo daaweyn taas ka sii saxsan, taasoo u oggolaaneysa daaweynta inay dib u dhigto ama yareyso bilowga cudurka Parkinson iyadoo aan waxyeello loo geysan maskaxda ama saameynaya shaqooyinka kale ee badan ee muhiimka ah ee dareemayaasha foosha ee aan caadiga ahayn ama nidaamka qalliinka.
Rainbo Hultman, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Waaxda Fiyoolojiga Molecular iyo Biophysics, Machadka Iowa Neuroscience - Carver College of Medicine, Jaamacadda Iowa
Isku xirnaanta korantada maskaxda ee dhanjafka: Ku aaddan horumarinta daaweynta ku-xirnaanta shabakadda
Dhanjafku waa faafis, inta badan cillad-daciifisa. Waa mid adag oo caan ku ah daaweynta; dadka qaba waxay leeyihiin calaamado kala geddisan, oo badanaa kiciya xasaasiyadda dareenka, oo ay ka mid noqon karaan xanuun, lallabbo, aragga oo daciifa, iyo saameyn kale. Dhanjafku wuxuu saameeyaa qaybo badan oo maskaxda ka mid ah, laakiin had iyo jeer isku si uma wada aha, daaweynta badanaana saameyn isku mid ah kuma yeelanayso qof ilaa qof. Daraasada Dr. Hultman waxay soo jeedineysaa in lagu baaro xanuunka dhanjafka iyadoo la adeegsanayo aalado cusub iyadoo looga dan leeyahay in lagu iftiimiyo waddooyinka cusub ee daaweynta.
Cilmi-baaristu waxay ku dhiseysaa kooxdeeda daah-furkeeda arrimo door ah, cabbiraadaha qaababka waxqabadka korantada ee maskaxda ku xiran xaaladaha maskaxda ee gaarka ah. Iyadoo la adeegsanaayo qalab lagu beero si loo cabiro waxqabadka maskaxda ee moodellada jiirka ee matalaya madax xanuunka dhanjafka daran iyo kuwa dabadheeraad ah, kooxdeeda ayaa indha indheyn doonta qeybaha maskaxda jiirku shaqeynayo iyo sida ay u kala horreeyaan miisaanka halbeega markii ugu horeysay Barashada mashiinka ayaa gacan ka geysan doonta abaabulka xogta la soo ururiyey, iyo khariidadaha elektrooniga ah ee la abuuray ayaa loo isticmaali karaa in lagu caawiyo in lagu garto qaybaha maskaxda ee ay waxyeellada soo gaartey, iyo sida elektromikada ay isu beddesho muddo ka dib, gaar ahaan bilowga cudurka daba dheeraada Tijaabadu waxay sidoo kale baareysaa qaababka waxqabadka korantada ee ku xiran jawaab celinta akhlaaqda; tusaale ahaan, astaamaha korantada ee lagu arkay maskaxda maado ee dooneysa in laga fogaado laydh dhalaalaya ayaa laga yaabaa inay bixiyaan hab lagu saadaaliyo jawaabaha aadka u daran ee dhanjafka.
Qeybta labaad ee cilmi baarista Dr. Hultman ayaa markaa adeegsan doonta isla qalab si loo eego sida loo heli karo daweynta iyo kahortaga. Waxyaabaha elektarooniga ah ee maadooyinka lagu daaweeyo daaweyntan ayaa la ururin doonaa lana barbardhigi doonaa kontaroolada si loo aqoonsado qaybaha maskaxda ay saameeyeen iyo qaabkee, ka caawinta muujinta saameynta daaweyn kasta / kahortag kasta, iyo sidoo kale saameynta daawada oo aad u isticmaasha madax xanuun, a waxyeellada guud ee ay la kulmaan dadka qaba xanuunka dhanjafka ee doonaya inay maareeyaan xaaladdooda.
Gregory Scherrer, Ph.D., Associate Professor, Waaxda Cilmiga Bayoolajiga iyo Jirka, UNC Neuroscience Center, Jaamacadda North Carolina
Tirinta aasaaska neerfaha ee xanuunka xumaanta: Wareegyada iyo daweynta cusub si loo joojiyo labada cudur ee xanuunka daba dheeraada iyo qabatinka opioid
Xanuunku waa sida maskaxdeenu u aragto kicinta waxyeelada leh, laakiin maahan khibrad keliya. Waa noocyo badan, oo ku lug leh gudbinta ka timaadda neerfaha ilaa laf-dhabarka iyo maskaxda, ka shaqeynta calaamadaha, kicinta ficil celinta, ka dibna la socoshada dhaqdhaqaaqa neural ee ku lug leh ficillada si loo dajiyo xanuunka muddada dhow iyo hababka barashada adag ee looga hortagayo mustaqbalka.
Xanuunku sidoo kale wuxuu udub dhexaad u yahay waxa Dr. Scherrer uu u arko inay yihiin laba cudur oo faafa oo isku dhafan: faafida xanuunka joogtada ah, ee saameynaya qaar ka mid ah 116 milyan oo Mareykan ah, iyo cudurka opioid ee ka dhasha isticmaalka xun ee daroogada xoogga leh iyo inta badan balwadaha si loo daaweeyo. Daraasaddiisa, Dr. Scherrer wuxuu raadinayaa inuu si sax ah u ogaado sida maskaxdu ugu xirto xumaanta xanuunka. Daawooyin badan ayaa raadinaya inay saameyn ku yeeshaan dareenkaas xun laakiin badanaa waa kuwa dibedda ka yimaada oo sidoo kale kiciya abaalmarinta iyo wareegga neefsashada, taasoo horseedda qabatinka (iyo kordhinta dheeraadka ah) iyo xirmidda neefsashada ee mas'uulka ka ah dhimashada la xiriirta opioid.
Kooxda Dr. Scherrer waxay abuuri doontaa khariidad maskaxeed oo ballaaran oo ku saabsan wareegyada shucuurta xanuunka iyadoo la adeegsanayo qabashada hiddo-wadaha iyo calaamadeynta dareemayaasha dareemayaasha ee dhaqdhaqaaqa firfircoonida leh calaamadaha dhaadheer. Ta labaad, unugyada maskaxda ee firfircoon ayaa lakala saari doonaa oo koodhadhkooda hidde sida loo kala saari doono, iyadoo laga raadinayo soo dhaweynayaal caadi ah unugyadaas oo bartilmaameed u noqon kara daaweynta. Ugu dambeyntiina, cilmi-baaristu waxay baari doontaa iskudhafyada maktabadaha kiimikada ee loogu talagalay inay la falgalaan mid ka mid ah kuwa la aqoonsaday ee duubayaasha bartilmaameedka ah; saameynta ay iskudhisyadaasi ku leeyihiin raaxo xumada xanuunka; iyo haddii xeryahan ay sidoo kale halis ugu jiraan in si xad dhaaf ah loo isticmaalo ama ay saameyn ku yeeshaan habka neefsashada. Ugu dambeyntii, ujeedku waa in laga caawiyo sidii loo heli lahaa habab wanaagsan oo lagu yareeyo dhammaan noocyada xanuunka iyo in la wanaajiyo fayo-qabka iyo tayada nolosha bukaannada la kulma.